xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: EU စီးပွားရေးလွှမ်းမိုးမှုကို ချိန်ခွင်လျှာညှိမဲ့ BRICS
EU စီးပွားရေးလွှမ်းမိုးမှုကို ချိန်ခွင်လျှာညှိမဲ့ BRICS
BRICS ဆိုတာကတော့ ဘရာဇီး ၊ ရုရှား ၊ အိန္ဒိယ ၊ တရုတ် နဲ့ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံတွေ ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထား တဲ့ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုရဲ့ အမည်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဘရာဇီးသမ္မတ ဒီးမားရော့ဆက်ဖ်၊ ရုရှားသမ္မတ ဒမီဒရီ မီဒီဒက်ဗ် ၊အိန္ဒိယ ၀န်ကြီးချုပ် မာမွန်ဟန်ဆင်း ၊ တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်တောင် ၊ တောင်အာဖရိက သမ္မတ ဂျက်ကော့ ဇူးမား စတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆန်ညာမြို့မှာ ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကြီးဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ ပေါ်မှာ အနောက်အုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေက၊အထူးသဖြင့် အီးယူလိုအဖွဲ့မျိုးရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ထိန်းညှိဟန့်တားလာနိုင် လိမ့်မယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ် ။ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Voice Of Myanmar ရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ ဦးကိုကိုအောင် ကိုဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ။
" ဒီအဖွဲ့ကြီးက ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာစပြီးဖွဲ့ခဲ့တာဗျ စဖွဲ့တုန်းက ဘရာဇီး၊ရုရှား၊အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ပဲပါတယ် အဲဒီတုန်းက BRIC ခေါ်တာပေါ့ လေ.. ဒီနှစ်မှ အိမ်ရှင်တရုတ်က ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ တောင်အာဖရိကကိုပါထည့် လိုက်ပြီး BRICS ဆိုတာဖြစ်လာတာပါ လက်ရှိ ဒီ ၅နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးရဲ့ ၅ပုံ ၁ ပုံလောက် ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒါ စီးပွားရေးအရ အင်မတန်အင်အားတောင့်တဲ့အဖွဲ့ ကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်"
" နောက်ပြီးဒီအဖွဲ့ကြီးက ၂၀၀၁ မှာစဖွဲ့တယ်ဆိုပေမယ့်လို့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မှ ခေါင်းဆောင်တွေစပြီး တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ် ၂၀၀၉ မှ ပီပီပြင်ပြင် အသက်ဝင်လာတယ် လို့ပြောလို့ရပါတယ်၊နောက်ပြီးတော့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ အခြေခံနိုင်ငံရေးပုံစံ မတူညီမှုတွေပေါ်မှာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒအခြေခံတွေလည်း ကွဲပြားနေတာမို့ ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အခြေခံမူတွေချမှတ်ရာမှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနိုင်တယ်လို့လဲ မြင်တဲ့သူတွေရှိတယ် ပညာရှင်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကတော့ ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုဟာသိပ်ပြီး ကျစ်လစ်အားကောင်းမှု မရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့ အင်အားတဖြည်းဖြည်းကြီးလာနေတယ် ဆိုတာကတော့ မငြင်းနိုင်တဲ့ အချက်ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေားဆိုင်ရာ အခြေခံတွေ ကို ပြောင်းကောင်း ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ သုံးသပ်နေကြတာတွေလဲရှိပါတယ် ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင် လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဒီ BRICS အဖွဲ့ကြီးဟာ EU လို အဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ စီးပွားရေးကိုအခြေခံပြီး နိုင်ငံရေးအရ အသာစီးရအောင်ကြိုးပမ်းလာမှုတွေကို ထိန်းညှိလာနိုင်တော့ မယ်လို့ ယူဆပါတယ် " ဟု၎င်း၏ အမြင်ကို သုံးသပ်ပြောကြားသွားပါသည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 5:13 AM
လေသွင်းလက်နက်ပုံတူများ ရုရှားက တီထွင်ထုတ်လုပ်နေ
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံများ ( ၂၉ - ၄ - ၂၀၁၁ )
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံများ ( ၂၈ - ၄ - ၂၀၁၁ )
နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၉ ဦး အာဖဂန်တွင် အပစ်ခံရ၍ သေဆုံး...
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံများ ( ၂၇ - ၄ - ၂၀၁၁ )
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံများ ( ၂၅ - ၄ - ၂၀၁၁ )
ထိုင်း - ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်တိုက်ပွဲ ၄ ရက်ဆက် ဖြစ်ပ...
အမေရိကန်တပ်သား ၀ီကီလိခ်သို့ သတင်းပေးဟုစွပ်စွဲခံရ ...
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံများ ( ၂၄ - ၄ - ၂၀၁၁ )
နေတိုးလေယာဉ်များ အရပ်ဘက်ပစ်မှတ်များကိုပါပစ်ခတ် ၊ လ...
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံများ ( ၂၃ - ၄ - ၂၀၁၁ )
ထိုင်း - ကမ္ဘောဒီးယား ထပ်မံပစ်ခတ်ကြပြန်
မြန်မာအစိုးရသစ် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ အဆင့်မြှင့်တင်၊ ၅နှစ်...
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံများ ( ၂၂ - ၄ - ၂၀၁၁ )
ထိုင်း - ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံများ ( ၂၁ - ၄ - ၂၀၁၁ )
Fukushima နှင့် Chernobyl နှိုင်းယှဉ်ချက်
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံများ ( ၂၀ - ၄ - ၂၀၁၁ )
ကဒါဖီ၏ကွပ်ကဲမှုတပ်မကို နေတိုးလေယာဉ်များဗုံးကြဲ၊ သူ...
ယနေ့ သတင်းဓါတ်ပုံ ( ၁၉ . ၄ . ၂၀၁၁ )
ဆီးရီးယား အတိုက်အခံကို အမေရိကန်ထောက်ပံ့မှု၊ ၀ီကီလိခ...
တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးပြီ ၊ သွေးနီးကြစို့
ကဒါဖီအစိုးရ ပြုတ်ကျသည်အထိ နေတိုးဆက်တိုက်မည် ၊ လက်ခ...
အိုင်ဗရီကို့စ်တွင် ကုလသမဂ္ဂတပ် ဘက်လိုက်ဟု ရုရှားသမ...
ပေးဝေသူနှင့် ဆက်ခံသူတို့၏ အေးအေးချမ်းချမ်း ၂၀၁၁ သြ...
EU စီးပွားရေးလွှမ်းမိုးမှုကို ချိန်ခွင်လျှာညှိမဲ့ B...
EU မှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကန့်သတ်ချက်အချို့ လျှော့ခ...
အာဖရိကယူနီယံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက် လစ်ဗျားသူပ...
ဖဆပလခေတ်က လွှတ်တော်နှင့် သတင်းစာ (၂)
အမေရိကန် လူ့အခွင့်ရေးအစီရင်ခံစာ တရုတ်ပယ်ချ
အိုင်ဗရီကို့စ်သမ္မတ လောရင့် ဂက်ဘို အဖမ်းခံရ
ဖဆပလခေတ်က လွှတ်တော်နှင့် သတင်းစာ (၁)
အာဖရိက ယူနီယံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက် ဗိုလ်မှူး...
အိုင်ဗရီကို့စ်တွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့်ပြင်သစ်တပ်များက သမ္မ...
အမေရိကန် က အီရတ်ကိုကျူးကျော်မှု ၈ နှစ်ပြည့် ၊ ကျူး...
စာရေးဆရာကြီး ပါရဂူ ကွယ်လွန် ရှာပြီ
Acer မှ touchscreen နှစ်ခု ပါဝင်သော laptop ထုတ်လု...
လစ်ဗျားတွင် နေတိုးတပ် မှားယွင်းပစ်ခတ်ပြန်
ဂျပန်တွင် အင်အားပြင်း မြေငလျင် တစ်ခု ထပ်မံလှုပ်
အမေရိကန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ခန...
သတင်းဖန်တီးမှု ပညာနှင့် ဂျပန်ဆူနာမီ မှ ခွေးတစ်ကောင်...
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်လက်လုပ် ချိန်ကိုက်ဗုံးတစ်လုံး အ...
ကုလသမဂ္ဂ က အိုင်ဗရီကို့စ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းနေ...
ကိုအာရ်ကျမ်း မီးရှိုမှု မကျေနပ် ၊ အာဖဂန်ပြည်သူများ ဆ...
မြန်မာ ထိုင်းနယ်စပ်နောက်ခံ ဇာတ်ကား ဥရောပတွင် ရုံတင...
နိုင်ငံစုံတပ် မှားယွင်းပစ်ခတ် ၊ လစ်ဗျားသူပုန် ၁၃ ဥ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ အိမ်တော်တွင် မိန...
သင်အစိုးရဆိုလျင်ဘာလုပ်မလဲ ( ၅ )